ISportage yakwaKia iyintandokazi | Isolezwe
ISportage yakwaKia iyintandokazi
Ezezimoto / 25 January 2019, 11:14am / FANELESIBONGE BENGU
IKIA SPORTAGE entsha
NGASEKUPHELENI konyaka odlule iKia yethuthukise enye yezintandokazi zezimoto zayo iSportage ukuze izoqhubeka ibe nendawo ezinhliziyweni zabathengi.
Ukuba yintandokazi kweSportage kufakazelwa wukuthi ezimotweni zakwabo eziphakeme yiyo edayisa kakhulu. Ngenyanga eyedlule kudayiswe angu-208 kuleli. Futhi emhlabeni jikelele sekudayiswe angaphezulu kuka-5 million.
Lena ekhona njengamanje ngeyesizukulwane sesine futhi kuvela ukuthi sekudayiswe angaphezulu kuka-1 million kusukela yethulwa emhlabeni jikelele ngo-2015.
Ukuze izoqhubeka nokudayisa, kwaKia bathe ukuyithintathinta lapha nalapha bakhipha ezinye izinhlobo bebe bethula ezinye futhi.
Okuyiyo eyisingeniso emndenini wamaSportage yi-Ignite. Amalambu bawabeke aba phezulu ngaphambili ukuze uzobona kahle. Ngaphezu kwalokho aphinde abe namaLED Daytime Running Lights enza ukuthi abanye abashayeli bakubone.
I-grille bathe ukuyithinta baphinde bashintsha nobhampa. Emaceleni izibuko zine-indicator futhi inamarimu angu-17 inch (nesipele ebhuthini siwusayizi ofanayo futhi sinerimu) bese kuthi okhakhayini ibe nama-roof rails.
Ngemuva ubhampa bawuthintile ukuze kuzocaca ububanzi bemoto. Esihamba ngayo inombala omhlophe othi uma igeziwe ucwebezele. Ikhona neminye imibala.
Ungayibona ithothene kodwa uma ungena ngaphakathi ivulekile.
Izihlalo zintofontofo futhi abagibeli bahlala ngokukhululeka. Ebhuthini kunekhava yokuvikela impahla ukuthi ingashayi iwindi futhi uma ulalise izihlalo, isikhala wudedangendlale. Ngikwaze ukulayisha ibhayisekili elikhulu ngaphandle kokukhipha amasondo.
Njengoba ngishilo ngenhla ukuthi “iyisingeniso” emndenini weSportage, nezinto efika nazo ziwubufakazi balokho. Okufike kugqame wumsakazo kwazise “uwumhlobo mdi”. Uwulawula ngezinkinobho emaceleni yize kunjalo kodwa uyakwazi ukudlala i-USB noma udlale umculo okwiselula ngeBluetooth. Kukhona amabhathini esiteringini okuphendula iselula, cruise control nokubheka imininingwane ngohambo lwakho kwi-instrument cluster.
Ezinye izinto enazo zihlanganisa i-aircon, amawindi kagesi, indawo yokuphumuza ingalo phakathi nendawo, amalambu azikhanyelayo, sensor akusiza uma upaka nokunye.
Le moto ifika nenjini entsha engu-1.6 litre GDI etholakala kuphela kule nhlobo. Uyizwa zisuka nje ukuthi inamandla amance ngoba kuvele kube ngathi isindwa wumzimba. Lokhu kufakazelwa wukuthi ukufika ku-100km/* kuyithatha imizuzwana engu-12.1. Amandla ale njini angu-97 kW netorque engu-161 Nm.
Isebenzisa i-gearbox oyi-6 speed automatic.
Engikuqaphelile wukuthi ugearbox ububuye uthathe isikhathi ukushintsha, ikakhulukazi uma uhamba kahle ungajahe ndawo, izwakale idumela phezulu. Kwesinye isikhathi bengize ngizishintshele mina. Uma usuhamba emgwaqeni ovulekile ngo-120km/* inokudideka ukuthi ifake liphi igiya. Lokhu kugqama kakhulu uma uyifake ku-cruise control uyizwe ilokhu ishintshashintsha amagiya kungenasidingo.
Lokhu ngikholwa wukuthi kuba nomthelela endleleni edla ngayo uphethroli ngoba ibilokhu iphuza kwalinganiselwa kwayisishiyagalolunye emgwaqeni ovulekile nasedolobheni.
Ezokuphepha zihlanganisa amabhreki e-ABS ne-Electronic Brake-force Distribution, ama airbag ayisithupha, indawo yokufaka isihlalo sengane, Electronic Stability Control, Hill-start Assist, Downhill Brake Control nokunye.
Sengiphetha iSportage iyimoto ekahle yomndeni ngenxa yokuvuleka kwayo. Iyabukeka futhi inakho konke okudingayo emotweni. Ngaphandle kokudideka kwegiya, ihamba kamnandi ngoba ithule ngaphakathi futhi intofontofo. Okunye okuhle ngayo wukuthi, ngokocwaningo lweTrue Price, ingenye yezimoto ezidayiseka uthole imali enhle ngayo.
KIA Sportage 1.6 GDI Ignite (6-Speed Auto) - R386 995
Iphuma ne waarranty yeminyaka emihlanu, roadside assistance yeminyaka emihlanu ne-service plan yeminyaka emihlanu noma * -90 000km.